Mourinho oo DAAHA KA ROGAY sidii ay ku weysay United saxiixa Renato Sanchez – Gool FM
Kaafi August 7, 2016
(Manchester) 07 Agoosto 2016. Jose Mourinho waxa uu doonayey in uu Renato Sanches u soo iibiyo Manchester United, laakiin waxaa la magacaabay xilli dambe, sidaas waxaa qaba tababaraha.
18 jirka waxa uu bilowgii xagaagan ugu biiray Bayern Munich heshiis markii hore ahaa €35 million balse sare ugu kici kara €80m balse ku xiran horumarada uu laacibka ku sameeyo bandhigyadiisa.
Mourinh, yeelkeede, waxa uu xaqiijiyey xiisaha ay United u qabtay da’yarka ugu dambeyn loo magacaabay yaraankii ugu wacnaa Euro 2016.
Waxa uu u sheegay MUTV: “Xilli dambe ayaan imi. Waxaan saxiixay Maajo, wadahadalada waxaan bilownay toddobaad kii ka horreeyey, laakiin gaba’ahaanba waan ka baxnay loolanka. Hadii aan xilli hore imaan lahaa, waan u dagaalami lahaa isaga.
“Manchester United wax badan ayey daawada Renato malaha aniga ayaa ka badan. Wax badan aniga oo guriga joogay, waxaan daawaday kulamo badan oo Benfica iyo horyaalka Portugal ah, wax badan ayaan ka bartay wiilka waqtigaas.
“Waxa uu jogaa koox weyn, meel uu hubaal noqon karo horyaalka. Kooxda waxa ay haysataa ciyaaryahano heer sare ah wax yarna u yara eg dhismaha Benfica.”
DAAWO: Nin u eg Tababare Jurgen Klopp oo ku soo biiray shaqaalaha Liverpool... (Kooxda Reds oo labo Klopp yeelatay!)